Home Wararka WAR DEG DEG:Nin Xaskisa ku dilay Magaalada Garowe
WAR DEG DEG:Nin Xaskisa ku dilay Magaalada Garowe
War deg deg ah oo hada nasoo garay ayaa sheegaya in Nin ka mid ah dadka ku noo Magaalada Garowe ee Gobolka Nugaal oo dil ugeestay Xaaskiisa, sida ay inoo sheegen dad halkaasi ku sugan.
Dad Goobjoogayaal ah oo ku sugan Magaalada Garowe ayaa inoo sheegay in Xaafad lagu Magacaabo Hanti -Wadaag oo ka mid ah Xaafadaha Garowe oo Nin ku dilay Xaaskiisa.
Sidookale waxay inoo sheegen in dilka haweynedan ninkeeda dilay uu dilkeeda u adeegsaday Tooreey.
Marxuumada ladilay ayaa lagu magacaabi jiray Khadra Maxamed Cali waxaana goobta soo gaaray ciidao ka tirsan Boolsiika Magaalada Garowe.
Maalmahaan danbe waxaa soo badanaya nimanka dilka ugeeysanaya xaasaskooda iyadoona dhacdooyin nuuaasi oo kale ah todobaadkii hore ay ka dhaceeN Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Previous articleFaah faahin:Qarax khasaare geystay oo goordhow ka dhacay Muqdisho
Next articleRW Kheyre: “Anaga qofka aan la heshiinay waa MW Cali Guudlaawe iyo hogaanka Hirshabeele”
Maamulka Somaliland oo Sikulul kaga Jawaabtay hadalkii Cabdiwali Gaas